J. League Football Clinic အစီအစဉ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ - The MFF
J. League Football Clinic အစီအစဉ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
The MFF » Activities » J. League Football Clinic အစီအစဉ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 10, 2020 / By Admin
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၊ J . League နှင့် ASIA Center JAPAN FOUNDATION တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် J. League Football Clinic အစီအစဉ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ရက်)မနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ အမျိုး သားဘောလုံးအကယ်ဒမီ (ရန်ကုန်)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားကို မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်၊ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ အီချီရိုမာရူယာမ၊ Albirex Singaporeမှ CEO မစ္စတာ နမ်ဘ၊ ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း (မြန်မာ)မှ အကြီးအကဲမစ္စတာဆာတိုနှင့် တာ၀န်ရှိသူများ၊ နည်းပြများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ” ဘောလုံးအားကစားဟာ ကလေးတွေရဲ့ ဘောလုံးထူးချွန်မှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ကင်းစင်ရေးစတဲ့ အချက်အားလုံးနဲ့ ဆက်စပ်နေတာကြောင့် ကလေးတွေအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ မြန်မာဘောလုံးလောက ပြောင်းလဲဖို့အတွက် ဘောလုံးစ ကစားမယ့် ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေအားလုံးကို လာရောက်သင်ကြားပေးတဲ့ Albirex Singapore အဖွဲ့ကို အလွန်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
” ဂျပန်- မြန်မာဆက်ဆံရေးဆိုတာ နှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာ အခြားကဏ္ဍတွေအပြင် ဘောလုံးကဏ္ဍလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကဏ္ဍပေါင်းစုံတိုးတက်လာဖို့အတွက် မျှော်လင့်သလို ကျွန်တော်လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။ လက်ရှိမှာ မြန်မာဘောလုံးလောက ပိုမို တိုးတက်လာတာတွေ့ရလို့ ၀မ်းသာမိသလို Albirex Singapore အဖွဲ့က လာရောက်သင်ကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ အီချီရိုမာရူယာမ က ပြောကြားခဲ့သည်။
J. League Football Clinic အစီအစဉ်အရ ဂျပန်နှင့် မြန်မာနည်းပြများ ပူးပေါင်း၍ အသက်(၁၂)နှစ်အောက် ကလေး ၈၀ ဦးကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက် မှ ၁၄ ရက်အထိ အခြေခံဘောလုံးနည်းစနစ်များ သင်ကြားပြသပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ ( ၁/ ၂၀၂၀) အစည်းအဝေး ကျင်းပ